सबैभन्दा बढि कमाउने फुटबलरको सूचीमा मेस्सी अग्रस्थानमा, कति कमाउछन् ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalसबैभन्दा बढि कमाउने फुटबलरको सूचीमा मेस्सी अग्रस्थानमा, कति कमाउछन् ?
Home खेलकुद सबैभन्दा बढि कमाउने फुटबलरको सूचीमा मेस्सी अग्रस्थानमा, कति कमाउछन् ?
विगतमा सबैभन्दा बढि कमाउने फुटबलरको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्ने गरेका क्रिस्टियानो रोनाल्डो यस वर्ष लियोनल मेस्सी भन्दा पछि परेका छन् । बार्सिलोनाका स्टार मेस्सीले लामो समयदेखिका चिर प्रतिद्वन्दी रोनाल्डोलाई कमाइमा पछारेको फ्रान्सेली प्रकाशन एल इक्वीपले जनाएको छ ।
युरोपेली फुटबलमा सबैभन्दा बढि कमाउने सूचीमा अग्रस्थानमा आएका मेस्सीले रोनाल्डोभन्दा प्रतिमहिना ३० लाख युरो बढि कमाउने गरेको उक्तः प्रकाशनले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेख छ । बढि कमाउनेको सूचीको दोश्रो नम्बरमा भने रोनाल्डो नै रहेका छन् ।
उक्त सूचीमा परेका नामावलि अचम्म पार्ने खालको पनि रहेको छ । यसमा प्रिमियर लिग, ला लीगा, सिरी ए, लिग वन र बुन्डेसलीगाका खेलाडीहरु समावेश भएपनि यी लिगहरुमा आबद्ध कुनै पनि खेलाडी यस सूचीका शिर्ष दश भित्र पर्न सकेका छैनन् ।
यस सूचीको शिर्ष स्थानमा पर्न सफल भएका मेस्सीले मासिक ७३ लाख युरो (कर कट्टा गर्नुअघि) कमाउने गरेको खुलासा भएको छ । त्यस्तै रोनाल्डोले ४१ लाख युरो प्रतिमहिना कमाउने गरेका छन् । यसरी कमाउनेको सूचीमा नेमार तेश्रो होलान् भन्ने धेरैको सोच विपरित नेमार चौथो स्थानमा छन् । पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पीएसजी) का स्टार नेमारले प्रति महिना २७ लाख यूरो कमाउने गरेका छन् ।
तेश्रो स्थानमा एट्लेटिको मेड्रिडका स्टार आन्त्वान ग्रिजमान छन् । उनले २९ लाख यूरो कमाउने गरेका छन् । उनी यसरी उच्च आम्दानी गर्नमा गत सिजनमा बार्सिलोनाको प्रस्ताव अस्विकार गर्दै क्लबसँगै नयाँ सम्झौता गर्नु रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै पाँचौ स्थानमा बार्सिलोनाकै खेलाडी लुइस स्वारेज छन् । उनले मासिक २५ लाख यूरो कमाउने गरेका छन् । छैठौं स्थानमा भने ग्यारेथ बेल (२२ लाख यूरो प्रति महिना), सातौंमा फिलिप कौटिन्हो (२० लाख यूरो प्रति महिना), रहेका छन् ।
त्यस्तै म्यानचेष्टर युनाइटेडका एलेक्सिस सान्चेज, पीएसजीका किलियन एमबाप्पे र आर्सनलका मेसुट ओजीलले क्रमश २० लाख यूरो, १५ लाख यूरो र १४ लाख यूरो कमाउने गरेको बताईको छ ।
जर्मनको चर्चित लिग बुन्डेसलीगामा सबैभन्दा बढि कमाउने खेलाडी भनेको रोबर्ट लेवान्डोस्की हुन् । उनले १२ लाख यूरो प्रति महिना आम्दानी गर्छन् ।